महिलाको गाला हेरेरै थाहा हुन्छ उनको स्वभाव, कोठी र डिम्पलले दिन्छ यस्तो संकेत ! | सुदुरपश्चिम खबर
महिलाको गाला हेरेरै थाहा हुन्छ उनको स्वभाव, कोठी र डिम्पलले दिन्छ यस्तो संकेत !
हुन त सबैले मुस्कुराएको राम्रै देखिन्छ तर अझ महिलाले मुस्कान छोडेको चाहिँ गजबै देखिन्छ । प्रसन्न हुँदा महिलाको गालामा लालिमा आउँछ र छालामा एकखाले चमक देखिन्छ ।
गाला हेरेर कुन महिला कस्ती हुन् बताउन सकिन्छ । जुन महिलाको दाहिने गालामा कालो कोठी छ, ती धनी, वैभवशाली र चरित्रवान हुन्छिन् । यस्ता महिलाले आफ्ना आवश्यकताहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छन्। उनीहरूले भौतिक सुख पनि पाउँछन्।
देब्रे गाला सानो भएकी महिलाको मृत्यु पतिभन्दा अघि हुन्छ । यस्ता स्त्री एकदमै शालीन र मिलनसार हुन्छन् । हाँस्दाखेरी गाला फुल्ने महिला मेहनती हुन्छन्।
पचास वर्ष कटेपछि यिनीहरूले सुखप्राप्ति गर्छन् । हाँस्दाखेरी गालामा खाल्डो वा डिम्पल पर्ने महिला तीक्ष्णबुद्धि भएकी, विवेकशील, छिट्टोछिट्टो कुरा गर्ने तथा आफ्नो गतिविधिका कारण सबैको हृदयमा स्थान लिने खालकी हुन्छिन् । यस्ता स्त्रीले धेरैसँग प्रेम गर्छन्।